Isiqinisekiso Sobuqiniso - hannari-shop
Okuqinisekisiwe okuqinisekisiwe noma imali emuva
Singabathengisi abangabanikazi besibili abanamalayisense yiKhomishini Yezokuphepha Komphakathi YaseJapan. Sizithengile izinto ezimakethe zabathengisi lapho izinhlanzi ezinqatshelwe ngokuphelele. Uyacelwa ukuthi wenze ibhidi ngokuqiniseka.100% Qinisekile okuqinisekisiwe.
Kukhona inkohliso eminingi kuwebhu, futhi sikuqonda kahle njengoba nathi siyisithandwa se-CHANEL. Izindlela ezintathu esingakuncoma ukuthi unazo:
1. Ungacela uthathe isikhashana bese ubheka izithombe ngokucophelela futhi? Imininingwane enjenge-seams, i-Hardware, nesikhumba, ayilokothi iqambe amanga, futhi sikholwa ukuthi ungahlukanisa. Sizojabula ukuthumela izithombe ezinkulu ngesicelo sakho.
2. Ungasebenzisa ubuqiniso online. Kubiza ama- $ 5 noma nje. Noma isiza esidumile sobuqiniso; ex. Iforamu lokuxhaphaza; bengizokusiza nawe.
[Uma kukhona inkinga mayelana nobuqiniso]
3. Ungabuya, futhi sikukhokhela zonke izindleko (into, ukuthunyelwa ezweni lakho, ukuthunyelwa kusuka ezweni lakho)
Ukubuyiselwa kwemali kuzokwamukelwa lapho kufakazelwe ukuthi kungumbambiso womkhiqizo ngemuva kwezinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku lento etholwayo. Umthengi kufanele alethe idokhumenti ebhaliwe ngumkhiqizo. Sizokutshela ukuthi ungayithola kanjani. Noma yimuphi umbiko ovela eceleni ngeke uthathwe njengombhalo ofanele.